HESHIIS DHAN: Real Madrid Oo Saxeexa Da’yar Mucjiso Ah Ku Garaacday Man United & Zidane Oo Sabab U Ah Fashilka Red Devils – Gool24.Net
HESHIIS DHAN: Real Madrid Oo Saxeexa Da’yar Mucjiso Ah Ku Garaacday Man United & Zidane Oo Sabab U Ah Fashilka Red Devils
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa inay saxeexa da’yarka kooxda Lyon ee Rayan Cherki ku garaacday dhigeeda ree England ee Manchester United xilli uu tababare Zinadine Zidane shaqsiyan uga qayb qaatay heshiiska.
Rayan Cherki oo kasoo baxay akaademiga kooxda Lyon ayaa loo arkaa mid kamida xiddigaha akaademiga kooxdaasi soo saaray kuwooda ugu wanaagsan iyadoo tayadiisa xiddigii ugu dambeeyay ee France kasoo baxa ee lagu arkay uu ahaa Kylian Mbappe.
Kaddib markii uu afar gool kasoo dhaliyay tartankii UEFA Youth League ee 2019-20, Cherki ayaa ciyaaray kulankiisii ugu horreeyay ee tartamada waaweyn ee Yurub ah ciyaartii ay Lyon la yeelatay Zenit ee Champions League.
Rayan Cherki ayaa heshiiskiisii ugu horreeyay ee xirfadle rasmi ah u saxeexay Lyon bishii July ee sanadkii hore balse waxay u muuqataa in Man United ay doonaysay inay kooxdaas kasoo wadato.
Si kastaba, tababare Zidane oo la sheegay inuu taageere weyn u yahay 16 sano jirkan ayaa si deg deg ah u hawl-galay si uu Red Devils uga hor istaago inay gacanta ku dhigaan Cherki.
Sida uu sheegayo il-wareedka Defansa Central, Manchester United ayaa 16 sano jirkan u bandhigtay heshiis ay adagtahay in la diido oo uu ugu biirayo kooxdeeda akaademiga.
Heshiiska ay Manchester miiska u saartay Cherki ayaa ahaa mid uu qandaraas rasmi ah iyo mushahar kordhin ku heli lahaa bisha August marka uu 17 sano jirsado.
Xaalad kastaba, Man United ayaa waayaysa saxeexa Cherki ee ay dhibtaas ka martay kaddib markii uu Zidane toos ula xidhiidhay xiddigan kana dhaadhiciyay inuu Real Madrid kula soo biiro suuqa soo socda.
Cherki ayaa ka ciyaara labada garab ee weerarka, booska weeraryahanka dhexe iyo No.10-ka ka dambeeya weeraryahanka intaba balse booska uu isku soo muujiyay ayaa ah midka No.10-ka.